किशोरी हत्या प्रकरण : प्रदर्शनमा गाउँहरुबाट पनि महिला आए, दोस्रो दिन बजार बन्द- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कञ्चनपुर — किशोरीको बलात्कारपछि हत्या आरोपमा प्रहरीले अभियुक्त सार्वजनिक गरेपछि चर्केको आनन्दोलन बुधबार पनि जारी छ । सोमबार साँझ प्रहरीले अभियुक्त सार्वजनिक गरेपछि मंगलबार बिहानैदेखि महेन्द्रनगरमा आन्दोलन चर्किएको हो ।
महेन्द्रनगर बजारमा प्रदर्शन गरिरहेका आन्दोलनकारीहरु । तस्बिर : भवानी भट्ट/कान्तिपुर ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेको व्यक्ति दोषी हुन नसक्ने उनीहरुको अडान छ। प्रहरीले वास्तविक दोषी उम्काउन यस्तो खेल खेलेको उनीहरुको आरोप छ।
आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केन्द्र बनाएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। गाउँगाउँबाट आएका महिलाहरु समेत आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
बुधबार पनि महेन्द्रनगरमा बिहानैदेखि स्थानीयले प्रदर्शन गरिरहेका छन्। बजार र यातायात बन्द गराएर स्थानीयले बजारको चोक चोकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका हुन्। व्यवासायीहरु स्वस्फुर्त रुपमा बजार बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिएका छन्। प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच पटक पटक झडप भईरहेको छ। दुवै पक्षबाट ढुंगा प्रहार भईरहेको छ।
साउन १० मा भीमदत्त नगरपालिका २ उल्टाखामिक १३ वर्षीया किशोरीको वलात्कारपछि हत्या भएको थियो। उनको शव सोहि नगरपालिकाको वडा नं. १८ को निम्बुखेडास्थित उखुबारीमा भेटिएको थियो। प्रहरीले सोमबार साँझ सोहि नगरपालिकाको वडा नं. २ का ४१ वर्षीय दिलिप विष्टलाई अभियुक्तका रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो।
मंगलबार सांझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको द्वीपक्षीय वैठकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमार बहादुर खड्काले अहिले पक्राउ परेको अभियुक्तलाई मात्र दोषी मानेर अनुसन्धान नरोकि पीडित पक्षले शंका गरेका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
पीडित पक्षले छोरी पढ्न गएको भीमदत्त नगरपालिका १८ स्थित घरका किशोरीमाथि छानविन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १४:३९
भाद्र ६, २०७५ रासस
काठमाडौँ — अनुगमनको क्रममा विरोध भएपछि गत सोमबारदेखि बन्द कालीमाटी तरकारी बजार बुधबारदेखि खुलेको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट खटिएको अनुगमन टोलीलाई दुर्व्यवहार गरेपछि विवाद हुँदा काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य तरकारी बजार बन्द रहेको थियो ।
व्यापारी विष्णु कँडेलका अनुसार व्यापारी र सरकारी अनुगमन टोलीबीच गत सोमबार विवाद भएपछि बन्द बजार आजदेखि खुलेको हो । तर पनि पहिलेको जति चहलपहल भने हुनसकेको छैन् । यसअघि दैनिक साढे ५ सय टनसम्म तरकारी तथा फलफूल भित्रिने गरेको थियो । आज भने करीब चार सय टन मात्र आएको व्यापारी कँडेलले बताए । पछिल्लो समय सरकारले बजार अनुगमन दैनिक रुपमा नै गर्दै आएको छ ।
अनुगमन टोलीले यसअघि धादिङ, चितवन, मकवानपुरलगायत जिल्लामा पुगी किसानले पाउने र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यबारे जानकारी लिएको थियो । किसानले पाउने मूल्यको चार गुणा बढीसम्म व्यापारीले उपभोक्ताबाट रकम लिने गरेकोले अनुगमनको क्रममा पाइएको थियो ।
अनुगमन टोलीलाई विरोध गर्न मुख्यभूमिका खेलेको भन्दै फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भरत खतिवडालाई पक्राउ गरिएको थियो । सरकारी अनुगमनको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले मङ्गलबार अबेर मात्र आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए ।
अनुगमन जानकारी बिना नै गर्ने र अब गरिने जुनसुकै क्षेत्रको अनुगमनमा विरोध गरे सरकारले कारबाही गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवका स्वकीय सचिव सन्तोष विष्टले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : भाद्र ६, २०७५ १४:२४